Ukukhetha ukunqunywa kwezinwele kwengane yakho, abazali abaningi bayaqonda ukuthi ukwenza lokhu kunzima njengomuntu omdala. Embonini yobuhle, izinguquko ezihlukahlukene zenzeka njalo, ziphefumulelwe izitayela ezintsha, ikakhulukazi ngokuphathelene nezinsizakalo zokugqoka izinwele. Iningi elithonywe izinwele zezimfashini zamantombazane.
Kodwa uma ukhetha i-hairstyle enhle kakhulu yamantombazane kufanele ucabangele isitayela. Ukuchaza kahle isitayela, kubalulekile ukucabangela ukuthi yiziphi izingubo, izicathulo ezingathandwa ngumntwana, lokho akuthandayo ukwenza, yiziphi amafilimu, umculo nezincwadi ezithakazelisayo. Kuphela emva kokutadisisa ngokucophelela imvelo nokuziphatha unganikeza ngokuphepha uhlobo oluthile lwezinwele.
Okuthandwa kakhulu ezinsukwini zethu kuyisitayela se- "Unisex" , ngoba ukugqoka izinwele ezithandwayo kule ndlela kuyakhululekile futhi akudingi imizamo eyengeziwe yokuma. Ukuze uqinisekise ukuthi izinwele zazihlelekile, udinga nje ukuhlanganisa izinwele zakho. Kufanelekile izingane ezihamba phambili, eziyinhloko ikakhulu lapho zikhetha izinto zokuzilibazisa, ukunganaki nokulula ezintweni zezinwele nezingubo.
Isitayela se-Classical sifana namantombazane ahlala ethule. Njengomthetho, basheshe bazimisele ekuqondeni impilo yabo futhi isitayela se-classic kubo siba yisisekelo kuzo zonke izigaba zokuphila. Lokhu kusebenza kokubili kokukhetha i-hairstyle kanye ne-wardrobe, nohlobo lomsebenzi.
Intsha eningi ikhetha izinwele ezimfashini, lapho isitayela sezemidlalo sibusa khona . Ukudala ukubukeka okufanayo, akuthatha isikhathi esiningi nomzamo. Konke okudingayo ama-sneakers, t-shirts, jeans kanye nezinwele ezincane.
Isitayela sothando sinokufanelekela amantombazane "ekhaya". Lesi sithombe sigcizelelwe yizembatho zemibala yethenda kanye ne-shades, futhi njengezingqimba ezihlukeneyo, izintambo, i-ryushechki kuma-blouses, iziketi kanye nezingubo zifanelekile. Izinwele ngokuvamile ziyi-curly, ubude obuphakathi, ezidinga ukucubungula okuphoqelekile.
Isitayela se-Avant-garde sithandwa yizingane ezisencane ezizikhomba ngokwazo ngamaqembu ahlukene angahlelekile noma ukunyakaza, befuna ukuveza isimo sabo sengqondo ekuphileni ngale ndlela. Izitayela zezitayela zalesi sitayela zifana nokulingana, kungenandaba, kunemininingwane enjengokukhonta okune-pinnate, ukusika i-whiskey noma ukuphahla, ama-nuffs, ukuxuba okunye nokunye okunye.
Abasha, abanesithakazelo kwezobuciko bezempi, bakhetha isitayela sase-Asia. Njengomthetho, lezi ziyizinwele ezinde, zifakwa emsila ngemuva kwentanyeni, izingubo ezizimele, ezilahlayo, ezigcobayo.
Isitayela sokuthi "ukunganaki" kubonisa isimo sengqondo sokungaboni ngaso linye. Mhlawumbe le ntombazane idinga ukunakekelwa okwengeziwe.
Uma ukhetho lwesitayela sezinwele kuthatha izintandokazi zezintandokazi futhi luchaza isitayela esithile, bobabili abazali kanye nengane bayojabula.
Imiphumela yokusetshenziswa kotshwala ezinganeni
Okufanele ukwenze ngesikhathi sakho samahhala
Indlela yokunakekela izingane zaseGermany zaseMalusi
Kungani eCalifornia kukhona ama-long-livers amaningi ase-Adventist, noma ukuthi ngokuhlakanipha kanjani ukudala isiko lokuphila isikhathi eside
Indlela yokunakekela izitsha zensimbi?
Isibikezelo sezinkanyezi ku-Aquarius ngo-2010
Umlingisi uJevgeny Morgunov
Ukumisa ingane ezinyaweni
Indlela yokukhanga ngaphezulu
Kuthiwani uma kungekho ubisi obanele esifubeni?